Black & Blue ဒင်ဗာမြို့မှယေဘုယျ Dress | Buddhatrends
$80.10 $89.00 သငျသညျ (10% Save$8.90)
Black က / M က Black က / L ကို Black က / XL Black က / XXL Black က / XXXL
ဤသည်မိုးပြာရောင်စပ်ချုပ်ပညာအလုံးစုံစားဆင်ယင်နေတဲ့ဗီရို, နှစ်သက်တော်မူ၏။ ထူးခြားကအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့အလားအလာပေးရပေါင်းစပ်ထားတဲ့, ဂျင်းနှင့် polyester နှင့်အတူဒီဇိုင်းရေးဆွဲ။ အဆိုပါအနက်ရောင်နှင့်အပြာအရောင်များနှင့်ထူးခြားသောဒီဇိုင်းစတိုင်နှင့်နှစ်သိမ့်အကြောင်းကိုစိုးရိမ်ပူပန်တစ်ချိန်တည်းမှာနေသောမိန်းမတို့အဘို့အဓိကဖက်ရှင်ကြေညာချက်ဖြစ်ကြသည်။ ကွဲပြားခြားနားသောခန္ဓာကိုယ်အမျိုးအစားများမိန်းမတို့အဘို့ဖြည့်တင်းဖို့, ဒီခြုံငုံစားဆင်ယင်ဒင်ဗာမြို့မှက M-3XL ကနေအထိငါးကွဲပြားခြားနားသောအရွယ်အစားအတွက်လာပါတယ်။
အရွယ်အစား (စင်တီမီတာ) တွေဆီကနေ အရှည်
အရွယ်အစား (လက်မ) တွေဆီကနေ အရှည်
အီး *** ဇ
селидеально, синтетикаконечно, нооченьприятнаяктелу, моделькакяхотела))
100-85-107 бралаအရွယ်အစား XL ။
ကို C *** ဏ
အို Vestido é perfeito eu adorei demorou စရဖ chegou direitinho ... Obrigada
Супер။ Всехорошопошито။ На 46 размерအယ်လ်Подошловзяла။ Доставкабыстрая။ ВКрымза2недели။ Хотелосьбычутьподлиннее။ Ноитакотлично။
L ကို *** ဏ
ငါကခစျြတျောမူအဆိုပါစားဆင်ယင် !!! ဒါဟာဓာတ်ပုံများ၌ရှိသကဲ့သို့အတိအကျအတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။ ထည်တို့သည်ကြီးစွာသောရှိပြီးသင်ကတင်ပါးကိုချွတ်ကျော် ယူ. သူတို့ကိုသင်ထိုကဲ့သို့သောစားဆင်ယင်အထိမ်းအမှတ်ချင်ကြဘူးလျှင်သည်ကြီးချ, အလွန်မူရင်းပုံရသည်။ AND အလွန်အစာရှောင်ခြင်းရေကြောင်း, သာ9နေ့ရက်ကာလ၌စပိန်ရန်အလွန်ပျော်ရွှင်ရောက်ရှိလာခဲ့
အီး *** R ကို
(နဲ့အတူသေးငယ်တဲ့လက်ဆောင်တစ်ခုနှင့်အတူ) အရည်အသွေးကောင်း 12 ရက်ပေါင်းဆိုက်ရောက်။ အရွယ်အစား 3xl 42 ပြင်သစ်မှညီမျှသည်
အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ sundress အစာရှောင်ခြင်းရေကြောင်းподарочекနှင့်ကောင်းမွန်သောရောင်းချသူ, ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကြံပြုသည်။
: D *** ဈ
N ကို *** ငါ
T က ***, f
ဤသည်စားဆင်ယင်ကျွန်မအနှစ်ကတည်းက Hades ဟာအကောင်းဆုံးစားဆင်ယင်ပါ! ယင်း၏နွေရာသီအဘို့အအေးမြသင်မူကား, ရှပ်အင်္ကျီဝတ်များနှင့်အောက်တွင် legging အခါ, အေးရက်ကကျော်တိုတောင်းတဲ့ဂျင်းဘောင်းဘီဂျာကင်အင်္ကျီနှင့်အတူ၎င်း၏ကြောက်မက်ဘွယ်၎င်း၏လည်းကောင်းသော, အရွယ်အစား, higly recommanded ရုပ်ပုံများကဲ့သို့သောပစ္စည်းကိုငါ့အဘို့စုံလင်ခြင်းရှိ၏,
စားဆင်ယင်စူပါ! ရုပ်ပုံအဖြစ်။ ကိုယ်ကျေနပ်!
တစ်ဦးက *** r
S က *** v
အမိန့်အလွန်မြန်ဆန်စွာလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ နွေရာသီ sundress အလင်း။ သငျသညျအလွန်ရောင်းချသူကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါချစ်တယ်။ ဘယ်လိုအဝတ်လျှော်ပြီးနောက်ကြည့်ရှုမည်။
ဒီစားဆင်ယင် Love! ဂရိတ်စျေးနှုန်းနှင့်အစာရှောင်ခြင်းရေကြောင်း။ ကျိန်းသေ tgis ရောင်းချသူထံမှနောက်တဖန်မဝယ်ပါလိမ့်မယ်။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်!
V ကို *** ဈ
N ကို *** N ကို
wow, ဖြန့်ဝေသည်အလွန်မြန်ဆန်စွာပဲ! နီးပါး 14 ရက်, ကျေးဇူးတင်ပါတယ်! အဆိုပါစားဆင်ယင်ကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါဂျင်းဘောင်းဘီထည်ပါးလွှာပေမယ့်ခြုံငုံကကောင်းတဲ့စားဆင်ယင်ဖြစ်ပါတယ်။ ကောင်းသောဒီနိမ့်သောစျေးနှုန်းထိုသို့ရှိသည်။
S က *** ဦး
ဒါပေမဲ့ဒီအများအားဖြင့်တဦးတည်းရဲ့အရွယ်အစား ... ကိုယ့်အကြိုက်ဆုံးစူပါအစာရှောင်အနည်းငယ်သေးငယ်စားဆင်ယင် XL ဖြစ်ပါသည်
, မူရင်း, အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အံ့သြဖွယ်အရည်အသွေးမြင့် sundress! ကိုယ့်စိတ်အားထက်သန် !!!
N ကို *** t ကို
Y က *** ဎ
အလွန်အေးမြသော sundress! အရည်အသွေးအကောင်းလှ၏။
M က *** မီတာ
, G *** ဋ
အလွန်пошитသပ်သပ်ရပ်ရပ်မဟုတ် sundress အများကြီးမဟုတ်အေးမြပေမယ့်အစာရှောင်တင်ပို့, အတန်းအစားဒီဇိုင်းустраняетсяရန်လွယ်ကူသည်။
Карманпристроченнемногокриво ... еслиприсмотреться, тоэтозаметно ... востальномвсехорошо
СарафанчиквМосквуприбылбыстро။ Тканьчернаяоченьтонкая။ Присутствуетнесильныйзапах။
заказполучен, всехорошо, спасибопродавцу.Позжедополнюотзыв။
ငါ *** ဇ
ဖော်ပြချက်တိုက်စစ်ပါတယ်။ အကြံပြု !!!!
F ကို *** ဌ
S က *** y က
Супер! Супер! Сарафаноченьпонравился, исразмеромнепрогадала! Всемрекомендую, позжевыложуфото!
K သည် *** v
сарафанинтересный .. нобольшеподойдетдлябеременных, оченьполнит .. атаквсенорм
အေးမြ sundress .. ဒါပေမယ့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများသည်အလွန်полнитပိုမိုသင့်လျော် .. ဒါကြောင့်အားလုံးစံများနှင့်
S က *** z
entrega rápida.tardo9Dias တစ် Espana ။ Hermoso ။